Apple no mihevitra mividy The Morning Show orinasa famokarana | Aho avy amin'ny mac
Apple no mihevitra mividy The Morning Show orinasa mpamokatra
Ny orinasa famokarana ambadiky ny andian-dahatsoratra The Morning Show dia Hello Sunshine, orinasa mpamokatra fananan'i Reese Witherspoon (ankoatr'i Seth Rodsky sy Jim Toth), izay kosa pMandraisa anjara amin'ny mpilalao andiany malaza indrindra amin'ity orinasa mpamokatra ity, fa tsy io irery no manana fifanarahana manokana amin'ny Apple TV +.
Vokatra hafa ianao fampandrosoana ity orinasa famokarana sy izay ho navoaka tao amin'ny Apple TV + ny ambonin'ny miaraka amin'i Gugu Mbatha-Raw, Ny zavatra farany nolazainy tamiko amin'i Julia Roberts sy ny mozika series Ny karazan-tanindrazako. Araka ny voalaza avy The Wall Street Journal, Apple dia liana amin'ny fividianana ny orinasa mpamokatra vidiny manodidina ny iray lavitrisa euro.
Araka ny gazety ity, ny mpamokatra Hello Sunshine nahantona ny For Sale afisy roa volana lasa izay Ary nanomboka tamin'izay dia nanana suitors maro be, anisan'izany i Apple. Ny orinasa dia sarobidy amin'ny momba ny lavitrisa euro noho ny andian-dahatsoratra efa navoaka The Morning Show, Big Little Lies y Liitle Afo Everywhere.
Raha mividy Apple farany orinasa ity, fa mety misy lasa anisan'ny Apple Studios, ny orinasa mpamokatra orinasa Cupertino miasa ankehitriny Jamba ny oram-panala tamin'i Jake Gyllenhall, fanafahana amin'ny Will Smith sy Mpamono ny volana voninkazo miaraka amin'i Martin Scorsese sy Leonardo DiCaprio.
Ny première ny vanim-potoana faharoa ny andian-dahatsoratra The Morning Show it is voalahatra ny 17 septambra, roa taona taorian'ny première 'ny vanim-potoana voalohany. Izany hatrany no noho ny zava-misy fa ny Coronavirus areti-mifindra mararin'ny paralysisa sy izay vokatra rehetra Ankoatra izany, ny ankamaroan'ny ny soratra dia rewritten mba hifanaraka amin'ny toe-javatra fotoana nihazonana no mahita.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » Apple no mihevitra mividy The Morning Show orinasa mpamokatra
Ny asa fampidinana mozika avy amin'ny Spotify amin'ny Apple Watch dia manomboka mihodina
Ireo mpamatsy Apple Vietnamianina dia manery ny mpiasan'izy ireo hatory be loatra mba hisorohana ny areti-mifindra